Herinandron'ny fizahantany ara-panatanjahantena afrikana Ghana 2019 dia manangona haingana
Home » Lahatsoratra farany farany » Sports » Herinandron'ny fizahantany ara-panatanjahantena afrikana Ghana 2019 dia manangona haingana
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Ghana • Vaovao • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fizahan-tany dia fiampitana sisintany ho an'ny traikefa iray. Fizahan-tany momba ny fanatanjahantena dia hetsika iray toy izany izay nitondra olona marobe hiampita sisintany satria isaina ho toy ny Delegata momba ny fizahantany ara-panatanjahantena izy ireo ankehitriny.
Ny fizarana 2019 an'ny fizahan-tany momba ny fanatanjahantena afrikanina - ny praiminisitra Pan-afrikanina mpiray antoka avy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena sy fizahan-tany, izay mifindra isan-taona avy amin'ny firenena afrikanina mankany amin'ny iray hafa dia horaisina ao Ghana amin'ity taona ity ary hetsika roa lehibe no kasaina hatao lohalaharana amin'ny herinandro.
Izy ireo dia ny fihaonamben'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny lalao Olaimpika ary ny loka Afrikanina ho an'ny fanatanjahantena. Ny fihaonana an-tampony dia ho vavolom-pivoriana ho an'ny federasiona / komisiona / filankevitra ara-panatanjahantena, komity olympika, komity mpikarakara eo an-toerana, birao fizahan-tany, mpikirakira fizahan-tany ary mpandray anjara hafa avy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena sy fizahantany. Izy ireo dia hanjary hevitra iraisan'ny fiompiana ary hifanakalo tànana amin'ny fiaraha-miasa, mankany Afrika izay ahitàna ny fanatanjahantena ho fizahan-tany. Hatao ao amin'ny Hotely Oak Plaza any Accra Ghana izany, ny 19 - 20 septambra 2019.
Ao amin'ny lisitry ny mpandahateny dia i Juliet Bauwah, Dev Govindjee, Geoff Wilson, Tafadzwa Mapanzure, Abi Ijasanmi ary Seyi Akinwunmi.
Juliet Bawuah dia anarana ao an-trano amin'ny fanatanjahantena manerana an'i Afrika. Mipetraka eo amin'ny tontonana izay manapa-kevitra ny mpilalao baolina kitra afrikanina CAF amin'ny taona izy. Ny mpanorina ny Vovonana Afrikanina fanatanjahantena vehivavy dia mpiara-miasa amin'ny Ivontoerana Fanofanana amin'ny Radio Netherlands. Mpandray anjara amin'ny baolina kitra Afrikanina izy izao ao amin'ny TRT, orinasam-pahitalavitra eoropeanina malaza any Tiorkia.
Seyi Akinwunmi dia mpisolovava tanteraka izay nanangana ny varotra nataony tamin'ny mpilalao indostrian'ny fizahantany taloha. Izy dia filoha lefitra voalohan'ny federasiona baolina kitra Nigeria ary filohan'ny Lagos FA.
Dev Govindjee dia tantara an-tsarimihetsika cricket any Afrika Atsimo izay nilalao tamin'ny lalao kilasy voalohany 45 ho an'ny Faritany Atsinanana teo anelanelan'ny 1971 sy 1983. Niara-niasa tamin'ny International Cricket Council nandritra ny folo taona mahery izy. Mpitsara lalao iraisam-pirenena izy izao.
Mpikambana iray ao amin'ny birao ao amin'ny fizahantany Irlandy Avaratra - i Geoff Wilson dia mitantana ny orinasam-pakan-kevitra momba ny varotra sy ny fifandraisana ary mifantoka indrindra amin'ny fanatanjahantena. Lehiben'ny marketing sy serasera teo aloha (Irish FA) teo aloha, izy no tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe, programa ara-barotra, fampandrosoana ny marika ary fifandraisana amin'ireo mpankafy.
Geoff dia miara-miasa amin'ny an'ny FIFA, UEFA, AFC, FIBA ​​ary fikambanana fanatanjahantena manerantany amin'ny sehatra maro samihafa manomboka amin'ny drafitra stratejika, marketing ary fifandraisana, nomerika, fifandraisan'ny mpankafy, raharaham-bahoaka ary fizarana fahalalana / fifanakalozana fahalalana. Ho fanampin'izany, Geoff dia mifampiresaka amin'ireo orinasa teknolojia fanatanjahan-tena maro ao amin'ny CRM, eSports, azo anaovana ary azo ampifandraisina amin'ny mpankafy. Geoff dia mpampianatra am-potoana amin'ny marketing ao amin'ny Queen's University Belfast ary filohan'ny Netball Northern Ireland.
Tafadzwa Mapanzure dia consultant amin'ny indostrian'ny fanatanjahantena manana traikefa an-taonany maro amin'ny varotra ara-panatanjahantena any amin'ny faritra atsimon'i Afrika.
Abi Ijasanmi dia iray amin'ireo masoivoho vehivavy voalohany nifampiraharaha momba ny karama, ny fanekena ary ny fifanarahana amin'ny haino aman-jery ho an'ireo mpilalao basikety amerikana any Eropa, Azia ary Afovoany Atsinanana. Mpisolovava ara-barotra izay manana traikefa momba ny fampandrosoana 10 taona mahery, niditra tao amin'ny marketing marketing Trans-Atlantika izy tamin'ny taona 1998 ary lasa tompon'andraikitra amin'ny fisolo tena talenta amin'ny varotra maro karazana toa an'i Libanona, Italia, Litoania ary France izy. Mpilalao maso, ekipa ary fifandraisana amin'ny haino aman-jery, ary ny ezak'izy ireo no nahafahan'ny mpilalao nilatsaka tamina faritany tsy fantatra ary nibaiko saram-pahaizana.
I Abi no nitarika ny fizarana vehivavy ho an'ny TASM, ny karazany voalohany tao Eropa. Miaraka amin'ny fahafahany mamantatra ireo fotoana vaovao sy ny filàny amin'ny mety hisian'ny basikety afrikanina dia nametraka ny tenany ho mpanelanelana amin'ireo mpampiasa vola iraisam-pirenena mifantoka amin'ny basikety any amin'ny kaontinanta afrikanina i Abi. Tamin'ny 2006, ny fahaizan'i Abi dia nantsoin'ny medaly volamena volamena olympika, Tessa Sanderson hanome consultancy ara-dalàna sy ara-barotra ho an'ny Akademia fanatanjahantena vao noforonina ho an'ny lalao London 2012. Tale ho an'i Afrika izy izao ao amin'ny DiamondAir International.
Raha niresaka momba io hetsika io i Deji Ajomale-McWord, filohan'ny herinandro fanatanjahantena ara-panatanjahantena afrikanina, dia nilaza fa "ny tanjonay dia ny hampitombo ny vokatra eto an-toerana amin'ny firenena afrikanina, amin'ny alàlan'ny hetsika ara-panatanjahantena sy fialantsasatra ara-panatanjahantena. Ny fanatanjahan-tena dia azo atao komandy tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fanandramana izay ny fampiantranoana sy ny fizahan-tany ihany no afaka manamboatra azy.
Hifindra any amin'ireo firenena afrikana samihafa isika, isan-taona, hitarika ny fanambadiana fanatanjahantena sy fizahan-tany, ary hiambina ny tantaram-pitiavan'izy ireo mba hahazoana antoka fa miteraka tombony ara-tsosialy sy ara-toekarena izany. Ny lohahevitray amin'ity taona ity dia ny 'Fanitsiana ny fizahan-tany momba ny fanatanjahantena miaraka amin'ny tanjona kendrena maharitra' ary hiresaka lohahevitra hafa manelingelina ny fizotran'ny tolotra izahay, maninona i Afrika no tsy mahasarika hetsika ara-panatanjahantena ampy sy manamarika ny fialantsasatra ara-panatanjahantena any Afrika ”.
Rehefa nanontaniana momba ny loka i Deji dia nanamafy fa «na dia nanao ny laharam-pahamehana tamin'ny taona 2019 aza izy dia nahazo tombony ny kaontinanta afrikanina. Ny birao fizahan-tany sy ny marika amin'ny fizarana fanatanjahantena dia nandray anjara tamim-pahavitrihana tamin'ny fizotran'ny fifidianana sy ny fifidianana.
Nakatona izao ny vavahadim-pifidianana ary ny vato azon'ny besinimaro sy ny mpitsara no mamaritra ny mpandresy. Hamoaka marika vitsivitsy ihany koa isika ao amin'ny efitrano malalaky ny 'Friends of Sports Tourism', kilasy marika marika, andrim-panjakana ary olona mandresy lahatra ny antony handrisihana sy hanome aingam-panahy ny olona hiala ny fonenany ary handeha amin'ny toerana hafa eto amin'ny planeta, satria tanjona ara-panatanjahantena.
Ny tanjonay dia ny hametraka fari-pahalalana ho an'ny mpilalao ao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany ara-panatanjahantena, ary mampivondrona an'i Afrika amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena sy fizahan-tany. "
Fizahantany mitarika ny fanarenana ara-toekarena an'i Jamaika hatramin'ny ...
Fialana amin'ny fanafoanana ny sidina amerikanina